Konevets - isiqhingi elise ngasogwini olusentshonalanga yeLake Ladoga. It is wavakashela ngonyaka ngamakhulu izivakashi nezihambi kulo lonke elaseRussia.
Konevets esiqhingini ine indawo side kunaleso 8 square metres. km. ubude bayo eliwumkhawulo ububanzi mayelana 2 km, futhi ubude - 5 km. Ngesikhathi esifanayo emkhawulweni entshonalanga owelula strip emincane esihlabathini mayelana 1 km ubude, kanti oluseningizimu-empumalanga kukhona neziqhingana ezimbalwa egwadle ezinguzungeni ezinkulu. On Konevets isilinganiso kunqoba kobuso Lake Ladoga kumuntu ukuphakama 3 metres.
Konevets - isiqhingi nge sezulu esipholile, lapho amazinga okushisa ehlobo ongafinyelela amathathu plus degrees Celsius, kanti ebusika - udedela ukuze degrees amane. Ngokuqondene flora esiqhingini nezilwane, ezinye izilwane zitholakala ngalapha amaxoxo, izibankwa, sidla amagundane amancane, izimpungushe, onogwaja izingwejeje. Akuvamile, kodwa namanje uthole muskrat. Ngezinye izikhathi, ngasogwini siqhingi noma emaweni, ungabona lwezimpawu - ezincelisayo kuphela abahlala amanzi Lake Ladoga. Ngaphezu kwalokho, kukhona koloni elikhulu ngama-gull yezinyoni eziningi ezifudukayo. amaphesenti ayisishiyagalombili Konevets embozwe pine nesihlahla sonwele amahlathi. Futhi esiqhingini sikhule izihlahla lezihlahla: Alder, birch, umlotha, e-aspen, basswood, yebo isihlekehleke somuthi, Maple, Poplar, usika izingcezu azidingayo ngokucophelela lomtholo. Phakathi minyaka engamakhulu ayisithupha edlule, abantu kwalethwa futhi zitshalwa ugqumugqumu kanye currant, okusajingijolo, iplamu, cherry, apula ne-lilac.
Isiqhingi Konevets: izikhangibavakashi
Into okukhulunywa Liyindawo ezikhangayo nakwezokuvakasha futhi kulabo abafisa bajwayelane ezikhangayo layo eliyingqayizivele. Ngo izivakashi ikakhulukazi ukuza Konevets ukubonisa okuthiwa itshe ihhashi emele imbokodo 10 m ububanzi ezime njengesitebhisi skull wehhashi. Esikhathini zangenkathi yangaphambi kobuKristu, wayengumuntu i-altare lobuqaba okuyinto udela izizwe Finnish. Ngokusho yetinsita saint Arseny Konevsky, azinza esiqhingini ekhulwini le-14, axoshwe ihhashi-zamatshe wemimoya emibi ekhuluma yaphenduka amagwababa. Kumemori yalesi simangaliso e 1895 kwi imbokodo eyakhelwe indlwana encane, ongagcini kuze kube yilolu suku.
Konevets - siqhingi, njengelinye lamazwe izikhungo zamukelwa kabanzi ezinkolweni entshonalanga ye Russia, isikhathi esingaphezu 6 eminyaka, kuba nesithakazelo esikhulu isihambi. Ngokwesibonelo, ngaleso sikhathi, uhambele umndeni ka-Alexander II, u-Aleksandr Dyuma, uNikolai Leskov futhi Fedor Tiutchev. Izivakashi abalandela isibonelo sabo, uzokwazi ukuhlola Cathedral omangalisayo kukaJesu of the Virgin Mary nezinye izakhiwo eziningana kwekhulu le-19.
Konevets Isiqhingi: kanjani ukufinyelela
Ukuze ngifike kuleyo Konevets niya laseFinland Station Petersburg uthatha isitimela elibangise esiteshini Priozersk noma "Smithy". Udinga phuma esiteshini "ukuduma" bese ushintshela ibhasi kumzila "Pine - Vladimirovka".
Ukuya Konevets esiqhingini (IZITHOMBE okusesihlokweni esithi) ku imoto yakho siqu, kufanele ushiye Petersburg ngoba Priozersk onguthelawayeka futhi 106 km jikela ngakwesokudla. Khona-ke, ukuhamba 0.5 km, ekuphambukeni edolobhaneni Izithelo ukwenza ijika kwesokunxele, bese uqhubeka uqonde Zaostrovye nomzana empambana futhi jikela ngakwesokudla. Ngemva 4 km phambi izivakashi ngeke ibhaxa lapho ukuthi unikezele pointer 'Bay Vladimir "nangemva 1 km (eduze sebhasi) - kwesokunxele maqondana pier.
Uma uhambo senzeka ehlobo, kubalulekile ukulinda izikebhe ezazihamba phakathi emzaneni futhi isiqhingi Vladimirovka Konevets. Uma sikhuluma uhambo ebusika, lapho Ladoga embozwe iqhwa, it engafinyelelwa ngezinyawo kanye omunye emizileni. Ungesabi ukuba ulahleke, njengoba ibanga ukuthi kuzodingeka libuyele, 5 kuphela km away, futhi lesi siqhingi kuyabonakala kusukela ogwini.
Kuhle isikhathi ukuvakashela
Ngeshwa, Konevets Island, ukubuyekezwa ngohambo lapho kuhlale nomdlandla, akulula ukufinyelela izindawo. Labo uke khona ngokuvamile, musa batusa ukuba bathathe uhambo ezifanayo esikhathini kusuka ngasekupheleni kukaMfumfu kuya ekuqaleni kuka-December futhi kusukela ngasekupheleni March kuya ekuqaleni kuka-April. Iqiniso liwukuthi uma kungenjalo kungaba izivakashi ebhishi ngesikhathi lapho navigation kunzima futhi kuyingozi ukuthutha phezu eqhweni. Akubalulekile ukuya Konevets ngoJuni njengoba bandisa inkonzo omiyane siyenzeka kule nyanga.
lapho ukuze uhlale
Konevets - isiqhingi lapho ehlobo ezivakashini nezihambi ngeke unezinkinga yokuhlala inhlangano. Njengoba inketho - nje ukubeka itende ehlathini. Ngaphezu kwalokho, izivakashi Orthodox kungaba nichithe ubusuku ephathelene nokuphatha izindela. Uma sikhuluma ngokuvakashela esiqhingini ebusika, okuwukuphela kwendlela - ukuthatha embhedeni isivakashi indlu encane ogwini. Isakhiwo kungokwalabo Konevsky sezindela futhi eziklanyelwe-pilgrim.
Njengoba sekushiwo, emakhulwini amaningi eminyaka Konevets indawo evamile yokugogobala ngamaKristu obu-Orthodox. Lolu hambo has izici zayo siqu kanye nemithetho. Ikakhulukazi, abafisa ukuya amathempelana Konevsky kumele uxhumane Izigodlo amasevisi pilgrimage esebenza ngaleso Petersburg farmstead at Zagorodny Ave, 7. Ngaphezu kwalokho, uhambo -. Akuyona nje uhambo. Yona kumelwe ngokucophelela futhi ulungiselele sina kulungiselwe ngendlela efanele. Qiniseka ukukhuluma umpristi, omethembayo yayiyobusiswa futhi zicele kuwo iseluleko seBhayibheli somuntu ohlakaniphileyo futhi abanolwazi.
Izikhangibavakashi nemisebenti Yeisk
"ITestamente Elidala Elithathu": incazelo yesithonjana
Sorbet iresiphi: Oriental nesitayela European